Xarunta dib u warshadaynta - Söderhamns kommun Gamla Webben
| Xarunta dib u warshadaynta
Långtå waa xarunta dib-u- warshadeynta Söderhamn.
Ka hel halkan (khariidadda).
Waa kuwan sida loo kala soocayo xarunta dib u-cusboonaynta:
Qashinka khatarta leh (Farligt avfall)
Dhammaan qashinka khatarta ah ayaa lagu ridaa dhismaha qashinka khatarta ah. Halkan waxaad ka ridi kartaa qalabka korontada, saliida, kiimikada sida rinjiga iyo cayayaanka, sunta buufin, batariyada yaryar, bateriga baabuurta iyo nalalka noocyada kala duwan.
Qalabka waaweyn (Stora vitvaror)
Halkan waxaad ka heli doontaa tuubooyin, kariyaal, mashiinka dharka lagu dhaqo, makiinadaha maacuunta lagu dhaqo, qalajiyeyaasha qalajinta, armaajooyinka, fiilooyinka iyo sidoo kale qaboojiyaha, iyo bambooyin kuleylka.
Ciida iyo dhagax (Jord och sten)
Halkan waxaad si toos ah ugu ridaysaa weelka, ciidda, dhagaxa, quraarada, foornada.
Ooda iyo caleenta geedaha (Ris och buskar)
Ku rid dhammaan xaawada iyo qashinka kaleba kunteenarka.
Baakadaha warqadda (Pappersförpackningar)
Halkan waxaad ku ridaa dhammaan noocyada baakadaha iyo warqadaha warqadaha.
Waa inaadan iska tuurin waxaad ka isticmaali kartaa kunteenarka si aad u yar oo karti leh oo ku yaal xarun dib-u-warshadeyn ah.
Halkan ayaad ku ridi kartaa wargeysyada, joornaalada, qoraallada, buugaagta jeebka iyo warqadaha qorista. Waraaqda hadiyaddu waa inaan la dhigin halkan, laakiin kunteenarka lagu rido ololi. Fudheelada iyo buugaagta xaddidan waa in lagu rakibaa qalabka guban kara.
Caagaha balastika ah (Plastförpackningar)
Kunteerkani waxaa lagu ridayaa dhammaan caagadaha balaastika ah.
Halkan waa lagu ridaa gasacyada cabitaanka ayga oo nadiif ah isla makaasna qalalan iyo tubooyinka alumiiniyamta ah iyo gasacya rinjiga iyo dabooladda dhalooyinka.
Muraayadaha iyo dhalooyinka ee midabada leh ayaa lagu tuuraa kuteenarka adigoo u kala saareeso muraayaddaha midabada leh iyo kuwa aan midib lahayn. Ka fur daboolka oo ku tuur kunteenerka birta ah.
Joodariyadaha iyo alaabta la gashado (Madrasser och stoppade möbler)
Halkan, alaabta guriga oo ka kooban maaddooyin birta moolada ah ayaa lagu ridi karaa.
Halkaan waxaad ku ridi kartaa wax walbo oo ka sameysan alwaaxda ringi leh iyo midaka aan rinji laheen laakiin kuma ridi kartid leh impregnerat.
Kartoonada adag (Wellpapp)
Kartoonada adag oo waaweyn iyo waraaqadaha laguma ridi karo kunteenarka.
Waxyaalha aan dib loo istimaali karin (Övrigt brännbart)
Halkan waxaa ku ridi kartaa buugaagta, dharka, bacda, barkinada, joodariyaasha, xargaha , kubeertada,(ha ku ridin caagagta adag sida kuwa jalaatada ama subaga) barkimooyin, suufka iyo frigolit.
Iron iyo birta (Järn och metall)
Waxyaabaha biraha sida mashiinka cawska, foornada cutada, birtaabada, digsiyaalka, waaskada musqusha, disiga lugta baabuurta , baaskiilada, hitarka kululeesada, iyo waxyaabo kale, inta badan ka samaysan biraha, waxaad ku tuurtaa kunteenarka oo keliya.
Waxyaabaha aan la gubi karin (Ej brännbart - deponi)
Wax kasta oo aan la gubi karin waxaa lagu shubayaa qashin qubka. Qashinka aan la gubi karin waxaa ka mid ah tusaale ahaan, muraayada,dhoobka, , fadhiga musqusha iyo dhoobada weji dhaqa, iyo isolering, tjärpapp,
Taayarada baabuurta badanaa dib ayaa loo soo warshdeeyaa ee waxaad ku ridi kartaa halka.
Taayrada baaskiilka waxaa lagu ridi karaa kunteenarka loogu talagalayin la gubo.
Geedaha daawada leh (Impregnerat trä)
Geed kasto oo leh daawadan ku rid halkan. Waa mu hiim in aad ku darin kuwa daawada rinjiga leh iyo kuwa aan la heen.
Dib u isticmaalid (Återbruk)
Kunteenarada dib u warshadaynta Långtå waxaa maamula ururo aan faa'iido doon ahayn oo soo ururiya alaabada ay sii iibin karaan. Halkan waxaad geyn kartaa wax walba oosi buuxa wali shaqeeya. Lama oggola inaad wax ka soo qaadato kunteenarka.